Kwinombolo 2 (Zen) - I-Airbnb
Kwinombolo 2 (Zen)
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJulie Rémi
UJulie Rémi yi-Superhost
Yiza ufumane indawo yethu yokuhlala eRue de l'Indre eChâteauroux. Senze konke ukukubonelela ngendawo apho uya kuziva wonwabile. Ikhitshi lixhotyiswe njengasekhaya. Isofa yibhedi yokwenyani ephindwe kabini xa isoluliwe. Itheyibhile ihambelana nenani labantu ngenxa yezandiso zayo. Phezulu uya kufumana indlwane epholileyo! Ibhedi yobukhulu bendlovukazi (160x200), kunye negumbi lokuhlambela elinesinki, ishawa, indlu yangasese kunye nethawula eshushu! I-air conditioning ikuwo omabini amanqanaba.
Yiza ufumane indawo yethu yokuhlala eRue de l'Indre eChâteauroux. Ifumaneka kumgama wokujula kumbindi wesixeko, fumana iChâteauroux yakudala enemivalo kunye neendawo zokutyela. Kwakhona kufuphi negadi yoluntu kunye nemidlalo yabantwana.
Umbuki zindwendwe ngu- Julie Rémi
Inombolo yomthetho: CRR166HT
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Châteauroux